Iindidi zababalisi: ziyintoni kwaye zeziphi ezikhoyo ezincwadini | Uncwadi lwangoku
Ngaba uyafuna ukubhala ibali, ibali elifutshane, inoveli? Inyani yile yokuba awudingi qeqesho ukuze uveze umbono wakho kwaye ubeke ephepheni. Kodwa enye yezona zinto zibalulekileyo zomsebenzi, ezinika intsingiselo kwaye zenze ukuba umfundi aqonde ukuba kwenzeka ntoni, ngumfanekiso wombalisi. Kwaye, ubusazi ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zokubalisa amabali? Kwaye ukuba nganye yazo ineempawu ezithile? Ezi zihlala zingaziwa, yiyo loo nto kusenziwa iimpazamo xa kubhalwa.
Ukuba awuzange ucinge ngaphambili ukuba kukho ababalisi bamabali abohlukeneyo (ngaphaya kwento onokucinga ngayo, ukuba kukho ukubhala okwesithathu okanye okokuqala), kwaye ufuna ukwazi ukuba ngaba ikhona into ehambelana ngcono nomsebenzi owucingileyo, apha ngu Sithetha ngeentlobo zababalisi bamabali, amanqaku kunye nexesha elifanelekileyo lokuzisebenzisa. Oku kuya kusebenza njengesikhokelo xa ubhala.
1 Yintoni umbalisi webali
2 Iindidi zababalisi
2.1 Iindidi zababalisi: umntu wokuqala
2.1.1 Umbalisi ophambili
2.1.2 Umbalisi oliNgqina
2.2 Iindidi zababalisi: umntu wesithathu
2.2.1 Umbali owazi yonke into
2.2.2 Ukukhetha okanye umbalisi olinganayo
2.2.3 Umbali we-Quasi-omniscient
Yintoni umbalisi webali
Kodwa ngaphambi kokuba ndikuxelele iindidi ezikhoyo, ngaba uyazi ukuba yintoni umbalisi webali? Ngaba uyazi ukuba yintoni umsebenzi wayo kumdlalo?
Singamchaza umlandisi njenge "umlinganiswa" onomsebenzi kukunika intsingiselo yebali, Cacisa ezo ziganeko okanye iinxalenye zomsebenzi, ngaphandle kwazo, umfundi ebengalahleka. Ngamanye amagama, sithetha ngomntu osebenza njengo "mbhali" kuba into ayenzayo ilibhekisa ngqo ibali ukuze umfundi azi yonke into ekufuneka eyazi ngalo lonke ixesha.
Ngaphandle kwelo nani, unokucinga ngencwadi? Ekuphela kwento onokuba nayo zizingxoxo ezingenantsingiselo, ezingazukunika umbono olungileyo webali. Kwelinye icala, umbalisi ujongene nokubeka imeko, yokuchaza yonke into ejikeleze imiboniso eyahlukeneyo, eyenzekayo, eyenzekileyo okanye eza kwenzeka njengoko ibali liqhubeka.
Ngenxa yoku kungasentla, akukho mathandabuzo ukuba umbalisi ebalini, kwinoveli, okanye ebalini ngumntu obaluleke kakhulu, kwaye inyani kukuba, kuye, unalo "ilizwi lokucula" layo yonke into eyenzekayo. Kodwa, lo mbalisi unokuba ziindidi ezininzi.
Ekuqaleni, unako Ukwahlula kuphela ezimbini iintlobo zababalisi, kumntu wesithathu, okanye kumntu wokuqala. Ngapha koko, phantse bonke ababhali baqala ukubhala umntu wokuqala, kuba bangena kwindima ephambili nakwincwadi yabo, ibali ... Kodwa, kukho abo abonelanga ukubonisa nje ukuba umntu ucinga ntoni; Kufuneka bagubungele ngaphezulu, kwaye yenziwa ngumntu wesithathu.
Kwaye zikho ezinye iintlobo zababalisi. Sikuxelela konke.
Iindidi zababalisi: umntu wokuqala
Masiqale ngombalisi womntu wokuqala. Singayichaza ngoluhlobo umlinganiswa oxelela ibali, umbono wakhe. Ngokwesiqhelo, lo ngumlinganiswa ophambili, ochaphazeleka kulo lonke eli bali, yiyo loo nto eba novelwano nguloo mzobo kuba uyabona, uziva, uphile yonke into emchaphazelayo.
Ngoku, inengxaki, kwaye kunjalo Ngeli bali, awukwazi "ukuchukumisa" indlela oziva ngayo, phila ixesha elide ... Umzekelo, cinga ukuba ukhethe umlinganiswa ophambili, kodwa unomhlobo osenyongweni, kwaye kukho imeko ebalulekileyo ekufuneka uyixelele; Ingxaki kukuba kufuneka uyixele ngokwembono ye-protagonist, hayi eyona mhlobo usenyongweni, kananjalo, nanini na xa ekho.
Ibangela ntoni ke? Ewe zininzi izinto ezimele ukungahoywa, naxa zibalulekile, kuba bezingazukulingana kuloo mlinganiswa.
Ngaphakathi komlandisi womntu wokuqala, zimbini iintlobo zababalisi ezinokubonwa ngokwahlukeneyo:
Yiyo le besikuchazile ngaphambili, oyena mntu uphambili ekubekeni ibali, ngombono wobuqu kwaye, uhlala uzithoba. Yindlela yakhe yokucinga, yokuba, yokuhlalutya ... Imizekelo ecacileyo inokuba sisisa seTwilight, iincwadi, apho umlinganiswa kaBella Swan inguye okhokela ibali.
Kule meko, kwaye nangona olu hlobo lombalisi lusetyenziswa kancinci, umlinganiswa obalisa ibali ayisiyiyo kwaphela le protagonist, kodwa ngumntu osondele kakhulu kuye, uhlala engumntu wesibini, kwangaxeshanye, ophembelela okwenzekayo. . Kwakhona, i-subjective kwaye inezimvo zayo, kodwa hayi kwicala eliphambili (indlela avakalelwa ngayo, into ayicingayo, njl.njl. nayiphi na enye into.
Nokuba ungaphakathi kulo mbalisi, unokufumana ezintathu ezohlukeneyo: umntu ongenabuntu, kuba uyazikhawulezisa ekubaliseni, ngaphandle kokuthotyelwa kokuchaphazela okwenzekayo; kwaye ubuso ngobuso, kuba yayilapho kwaye yayiyinxalenye yembali.
Umzekelo? Ewe inganguSancho Panza, osuka kuDon Quixote. Ibalisa ibali le "Nkosi" yayo kodwa ayinguye ophambili. Okanye kwiinoveli zikaSherlock Holmes, apho ayisiyiyo ophambili obalisa, kodwa umlinganiswa osondele kakhulu kuye.
Iindidi zababalisi: umntu wesithathu
Umbalisi wesithathu ungomnye wezona zikhethwe ngababhali abaninzi. Kwaye, ngayo, unokubandakanya abalinganiswa abaninzi, kuba eli nani lingumbukeli nje, umntu ongekhoyo, kodwa ukhawulelwe ekwenzeni ibali laziwe kwaye kwenzeka ntoni kulo lonke.
Ngoku, ngaphakathi kwezi zintathu iindlela zokwenza:
Umbali owazi yonke into
Ibizwa njalo kuba Ugqalwa njengoThixo, umntu owazi yonke into, kwaye ingabonisa zombini iimvakalelo umntu omnye azivayo kunye neengcinga zomnye.
Iya kubrasha imivumbo yebali ithathe umfundi ukuya esiphelweni, kodwa iyila ngokwayo isiseko esomeleleyo sokubazi abalinganiswa, ngakumbi abona baphambili.
Ukukhetha okanye umbalisi olinganayo
Eli nani linokuba phantse libe ukutolika njengomlandisi womntu wokuqala. Kwaye iya kukuxelela ibali kodwa kuphela kwindawo yokujonga umlinganiswa omnye, ayizukungena kwabanye. Kwaye yintoni eyahlula-hlula kweyokuqala? Kwelinye icala, indlela yokubhala kunye nokuvakalisa izimvo zakho; kwaye kwelinye, ulwazi lweenkcukacha ekunzima ukuzazi kumntu wokuqala.
Kule meko, eli nani liyafana nelokuqala, kodwa alinako phonononga iimvakalelo zabalinganiswa othetha ngabo. Ke, ngumbukeli nje kuphela oxelela oko akubonayo kodwa hayi iingcinga okanye ukuba baziva njani abalinganiswa okanye benze isigqibo sebali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iindidi zababalisi